कक्षा ११ मा यसै वर्षबाट नयाँ पाठ्यक्रम – Saurahaonline.com
कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को सङ्क्रमणका कारण २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन हुन नसकेपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि कक्षा ११ मा नेपाली र अङ्ग्रेजी गरी दुई विषय मात्रै अनिवार्य थियो । ऐच्छिक विषय भने तीनवटा नै रहनेछन् । विद्यार्थीले चाहेमा एक सय पूर्णाङ्कको थप एक विषयको परीक्षासमेत दिन पाउनेछन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले समाचार लेखेका छन् ।
नेपालमा हरेक दिन १० वर्षमुनिका एक जना बालिकामाथि बलात्कार २०७७, ६ माघ मंगलवार
प्रदेशसभामा संसदका कुर्सीे भुइँमा किन ठोकिए ? २०७७, ६ माघ मंगलवार
निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरुवा कानुनविपरित २०७७, ६ माघ मंगलवार
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई अन्तिम समयसम्म कसरत गर्दा पनि किन मोदीले भेट दिएनन् ? २०७७, ५ माघ सोमबार